Balotelli; “Waa suurtogal in Nice ku guuleysato Horyaalka Faransiiska balse ma sahlana” – Gool FM
Balotelli; “Waa suurtogal in Nice ku guuleysato Horyaalka Faransiiska balse ma sahlana”
(Nice), 06 Nof 2016 –Weeraryahanka kooxda OGC Nice ee Faransiiska Mario Balotelli ayaa shaaca ka qaaday in ay dhici karto in kooxdiisu sanadkan ku guuleysato Horyaalka Ligue 1.
Wareysi uu saakay siiyay Mario ‘Telefoot’ ayaa waxa uu yiri “Waa suurtogal inaan ku guuleysanno Horyaalka, balse aad bay u adag tahay, waayo waxaan keliya ciyaarnay 11 kulan”.
Super Mario ayaa xilli ciyaareedkan ka soo tegay Liverpool waxaana uu amaah ugu ciyaarayaa Nice isagoo dib u soo ceshanaya tayadii lagu yaqaanay.
“Weli waxbaa ii laaban, waaan doonayaa inaan goolal fara badan dhaliyo, waan faraxsanahay balse weli ma gaarin halkii ugu sarreysay, haatan waxaan dib u soo ceshtay 60-70% ciyaartaydii maxaa yeelay ma aanan ciyaarin kubbad muddo sanad ah” ayuu xusay Balotelli.
Nice ayaa hoggaanka u haysa Horyaalka Ligue 1 iyadoo leh iyadoo 3 dhibcood ka horreysa Monaco oo leh 26 dhibcood.
Balotelli mar uu ka hadlayay Daafaca Liverpool ay keydka ku hayso ee Faransiiska, Sakho waxa uu yiri “Waa mid ka mid ah Difaacyadii ugu fiicnaa ee aan la ciyaaray, waxaan u soo jeedin lahaa inuu yimaado halkan Nice”